Acid - 英语 - 缅甸语 翻译和实例
您搜索了: acid (英语 - 缅甸语)
ဤအန်ဇိုင်းသည် ဗိုင်းရပ်စ်၏ လက်ခံကလာပ်စည်းများ၏ ရီဘိုနူးကလစ်အက်ဆစ်ကို ပြန်ထုတ်ပေးရန် လက်ခံကလာပ်စည်းအတွက် ပဓာနကျပါသည်။
FDA က PCR အစား အိုင်ဆိုသာမယ် နျူကလီရစ် အက်ဆစ် ချဲ့ထွင်မှု နည်းပညာသုံး စမ်းသပ်မှု တစ်ခုကို ခွင့်ပြုချက်ပေးခဲ့သည်။
ACE2 သည် neutral amino acid transporter SLC6A19 ၏ အမြှေးပါးဖြတ်သန်း သွားလာမှုကိုလည်း ထိန်းညှိပေးပြီး Hartnup's ရောဂါနှင့်လည်း ပတ်သက်နေပါသည်။
2020 ပြည့်နှစ် ဖေဖော်ဝါရီတွင် တရုတ်သုတေသီများသည် သင်းခွေချပ်ရှိ ဗိုင်းရပ်စ်မျိုးစိတ်နှင့် လူတွင်ဖြစ်ပွားသော ဗိုင်းရပ်စ်မျိုးစိတ်နှစ်ခုအကြား မျိုးဗီဇအစဉ်၏ အချို့သော အပိုင်းများတွင် အမိုင်နိုအက်စစ် ကွာခြားမှုတစ်ခုတည်းသာ ရှိကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။
ACE2 ပရိုတိန်းတွင် N-terminal peptidase M2 ဒိုမိန်းနှင့် C-terminal collectrin ကျောက်ကပ်ဆိုင်ရာ အမိုင်နိုအက်ဆစ် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ဒိုမိန်း ပါရှိသည်။
နျူကလစ်အက်ဆစ် (DNA နှင့် RNA) (အဆင့် I ဆောင်ရွက်သူနှင့် ကာကွယ်ဆေးအဖြစ် လျာထားသည့်ဆေးဝါး- Moderna၊ mRNA-1273)
SARS-CoV အတွင်း RBD သည် လူသား ACE2 အပြင် ဗိုင်းရပ်စ်ဝင်ရောက်ရာတွင် ပူးတွဲရောဂါလက်ခံနေရာဖြစ်သော S1 အပိုင်းအစပေါ်ရှိ အမီနိုအက်ဆစ် 318 ခုမြောက်မှ 510 ခုမြောက် အထိတွင်ရှိသည်။
နောက်ဆက်တွဲအားဖြင့် ACE2 သည် angiotensin II (Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe) မှ carboxyl-terminal အမိုင်နိုအက်ဆစ် ဖီနိုင်းလာလန်နင်းကို ခွဲထုတ်ပေးပြီး ၎င်းကို vasodilator angiotensin (1-7)၊ (H-Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-OH) တွင် ရေဖြင့် ဓာတ်ပြိုကွဲစေသည်။
အများစုမှာ အိုင်ဆိုပရိုပိုင်း အယ်ကိုဟော သို့မဟုတ် အီသနောတို့ကို ပျစ်ခဲစေသည့် အေးဂျင့်များဖြစ်သည့် ကာဘိုမာ (အေခရစ်လစ်အက်ဆစ် ပေါ်လီမာ) သုံး၍ ဂျယ်အဖြစ် သို့မဟုတ် ဂလစ်စရင်း ကဲ့သို့ ဟူမက်တန့် သုံး၍ အရည်အဖြစ် သို့မဟုတ် သုံးစွဲရာတွင်လွယ်ကူစေရန် နှင့် အယ်ကိုဟော၏ ခြောက်သွေ့လွယ်သော သက်ရောက်မှုကို လျော့နည်းစေရန် အမြှုပ်အဖြစ် ဖော်မြူလာထုတ်ထားသည်။
အမှန်အားဖြင့် RBD တွင် သီးသန့်ရှိနေသော လူသားနှင့် ကြောင်ကတိုးတို့နှင့်ဆိုင်သည့် ဗိုင်းရပ်စ်ထံမှ မတူညီသော အမိုင်နိုအက်ဆစ်အကြွင်းအကျန်6မျိုးကိုသာ စူးစမ်းလေ့လာခဲ့ပြီး ၎င်းတို့အနက်မှ4မျိုးသည် ACE2 လက်ခံသည့်အရာနှင့် အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်ခြင်းအတွက် လက်ခံသည့်အရာနှင့် နှီးနွယ်နေသော အရာတွင် တည်ရှိပါသည်။
It has been reported that SARS-CoV-2 is sensitive to ultraviolet rays and heat at 56 °C for 30 minutes; ether, 75% ethanol, chlorine-containing disinfectant, peracetic acid, chloroform, and other fatty solvents, but not chlorhexidine, can effectively inactivate the virus.
SARS-CoV-2 သည် ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်နှင့် 56 ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ်တွင် 30 မိနစ် အပူပေးခြင်းကို ခံနိုင်ရည်မရှိဘဲ အီသာ၊ အီသနော 75%၊ ကလိုရင်းပါဝင်သော ပိုးသတ်ဆေးများ၊ ပါအက်စီတစ် အက်ဆစ်၊ ကလိုရိုဖောင်းနှင့် အခြား အဆီများသော ပျော်ရည်များက ဗိုင်းရပ်စ်ကို သေစေနိုင်သည်။ ကလိုဟက်စီဒင်းကမူ ထိုသို့ဗိုင်းရပ်စ်ကို သေစေနိုင်ခြင်းမရှိပါ။
၎င်းတို့သည် ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်သစ်ပင်တွင် SARS-CoV-2-နှင့် အလားတူဗိုင်းရပ်စ်များ၏ မျိုးနွယ်ခွဲနှစ်ခုအဖြစ်သို့ စုဝေးသွားကာ၊ ၎င်းတို့ထဲမှတစ်ခုသည် အမိုင်နိုအက်ဆစ်အစီအစဉ် ဝိသေသလက္ခဏာ 97.4% ရှိသော SARS-CoV-2 ပါရှိသည့် လက်ခံသည့်အရာနှင့် ပူးပေါင်းသောဒိုမိန်း (RBD) နှင့် ပို၍ဆင်တူပါသည်။
We can see that the real-time PCR test for nucleic acid in respiratory tract or blood samples was added to the second (18 January 2020) and third (22 January 2020) editions.
အသက်ရှူလမ်းကြောင်း သို့မဟုတ် သွေးနမူနာများ၌ နျူကလစ်အက်ဆစ် (nucleic acid) ပါဝင်မှု ရှိမရှိ အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ PCR စစ်ဆေးမှုကို ဒုတိယအကြိမ် (2020 ပြည့်နှစ် ဇန်နဝါရီ 18 ရက်)နှင့် တတိယအကြိမ် (2020 ပြည့်နှစ် ဇန်နဝါရီ 22 ရက်) တည်းဖြတ်မှုများတွင် ထည့်သွင်းခဲ့ကြောင်း တွေ့နိုင်ပါသည်။
တတိယ နည်းဗျူဟာမှာ နျူကလစ် အက်ဆစ် ကာကွယ်ဆေးများ (DNA သို့မဟုတ် RNA ကာကွယ်ဆေးများ၊ ကာကွယ်ဆေးဖော်ထုတ်ခြင်းအတွက် ဆန်းသစ်သော နည်းစနစ်) ဖြစ်သည်။
ကြွေးချွတ်ပစ္စည်းနှင့် အရေပြား ကာကွယ်ပေးသော ပစ္စည်းအပြင် ခေတ်မီသော ဖော်စပ်နည်းများစွာတွင် pH ထိန်းညှိပစ္စည်းအဖြစ် အက်ဆစ်များ (အက်ဆီးတစ်အက်ဆစ်၊ အက်စကိုးဗစ် အက်ဆစ်၊ လက်တစ် အက်ဆစ်)၊ ဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားသတ်နိုင်သော ဘင်ဇိုရစ် အက်ဆစ်နှင့် တခြား အရေပြားနူးညံ့ဆေးများ (ရှားစောင်းလက်ပတ်၊ ဗီတာမင်မျာ၊ ပူရှိန်း၊ အပင်အဆီအနှစ်များ ပါဝင်နိုင်ပါသည)်။ Oregon အများပြည်သူကျန်းမာရေး တက္ကသိုလ်မှ အလုံးစုံ စိစစ်ချက်အရ ဆပ်ပြာသပ်သပ်သည်လည်း ဖျားနာမှု ကာကွယ်ခြင်းနှင့် လက်များမှ ဘက်တီးရီးယားများကို ဖယ်ရှားရာတွင် ထရိုင်ကလိုဆန် ပါဝင်သည့် ဘက်တီးရီးယားသတ် ဆပ်ပြာများကဲ့သို့ သုံးစွဲသူများအတွက် အဆင်မီကြောင်းကို ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။
witching hour (英语>他加禄语)scienta et caritas (拉丁语>英语)makatotohanan o di makatotohanan (他加禄语>英语)sleeve (英语>他加禄语)فیلم سوپرامریکایی (毛利语>英语)koram in tagalog (拉丁语>他加禄语)ki runga i te whakaaro kotahi (毛利语>英语)posuero (拉丁语>英语)ali kwenda huku na huko (斯瓦希里语>英语)intrent (拉丁语>英语)patron saint (英语>他加禄语)secerah hatiku (马来语>英语)mensis horribilis (拉丁语>英语)alam ko na mahal mo ako at mahal parin kita (他加禄语>英语)maksud mystic pop up bar (英语>马来语)paulit ulit na lang nakakasawa na (他加禄语>英语)sufficiently (英语>他加禄语)betaaltermijn (荷兰语>英语)दुःखी महसुस (尼泊尔语>英语)buong pangungusap (他加禄语>英语)leof (英语>希腊语)request letter for salary (英语>他加禄语)do you save my picture (英语>他加禄语)insole shoes (英语>马来语)kata ho (尼泊尔语>英语)